ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): ဒီလိုလေးတော့ ကောင်းလောက်မယ်ထင်ပါရဲ့ (သို့ ) ဒီလိုလေး လုပ်ကြည့်ရင် ကောင်းမလား? (ပြန်လည် ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှု ၅)
ဒီလိုလေးတော့ ကောင်းလောက်မယ်ထင်ပါရဲ့ (သို့ ) ဒီလိုလေး လုပ်ကြည့်ရင် ကောင်းမလား? (ပြန်လည် ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှု ၅)
အရှင်တိက္ခဥာဏာလင်္ကာရ (ယောအသင်း) (http://www.yawcommunity.com) ၏ ပြန်လည်ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှု
You may say that I amadreamer ဆိုပြီး နိဂုံးစကားသတ်ကာ ဒီလိုလုပ်ကြည့်ရင် ကောင်းမလား လို့ တွေးတွေးဆဆ ဆိုလာသူကတော့ ကိုဝိမုတ္တိပါ၊ စာရေးတတ်သူပီပီ ရှဉ့်လည်းလျှောက်သာ ပျားလဲစွဲသာ အဖွင့် အပိတ်ညီညီ တင်ပြထားတာကို တွေ့ရပါတယ်၊ သူတစ်ယောက်တည်း ကောင်းမလားဆိုတဲ့ အတွေးကို လူများတွေကိုပါ ဆက်ပြီး တွေးစေပြန်တယ်။ ဒါကြောင့် အင်း. .ဒီလိုလေးတော့ ကောင်းလောက်မယ်ထင်ပါရဲ့ လို့ ပြန်ဆွေးနွေးချင်တယ်။
မြန်မာပြည်မှာ သံဃာလေးသိန်းကျော်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်၊ သံဃာတွေအားလုံး သာသနာသုံးရပ်ကို မလုပ်ကြပါဘူး၊ ပရိယတ် အားထုတ်တဲ့ သံဃာတော်များရှိသလို ပဋိပတ် အလုပ် ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေတဲ့ သံဃာတော်များလဲ ရှိပါတယ်၊ ယတ်ကော ပတ်ကော ဘာမှမလုပ်ဘဲ အဆင်ပြေသလိုလေး ဖာသိဖာသာ နေထိုင်တဲ့သံဃာတော်များကို လည်း တွေ့နိုင်တယ်၊
ပရိယတ်ကို သင်ယူလေ့လာပြီးနောက် ပရဟိတဖက်မှာဇောက်ချလုပ်နေတဲ့ သံဃာတော်များလဲ ရှိတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ အနေအထားအရ ဘာပြီးရင် ဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ မူဘောင် စည်းကမ်း ကန့်သတ်ချက်မရှိတာဟာ အားနည်းချက် တစ်ခုပါပဲ၊
ဆိုပါစို့.. နိုင်ငံတော်က ကျင်းပတဲ့ ဓမ္မာစရိယ စာမေးပွဲမှာ နှစ်စဉ် အောင်မြင်သူ နှစ်ရာအထက်မှာရှိပါတယ်..တချို့နှစ်တွေမှာ ငါးရာကျော်ပါတယ်။ အဲဒီဓမ္မာစရိယအောင် သံဃာတွေ ဘာတွေများ ဆက်လုပ်ဖြစ်လဲ။ တချို့လဲ သကျသီဟစာမေးပွဲ.. တချို့လဲ တိပိဋကစာမေးပွဲ..တချို့လဲ တက္ကသိုလ်ဆက်တက်..တချို့လဲ လူထွက်.. တကယ်တော့ ဓမ္မာစရိယ စာမေးပွဲဆိုတာ ပိဋကတ်ပင်လယ်ကို ကူးခတ်ဖို့ လမ်းစ လမ်းဝပဲရှိပါတယ်၊ လမ်းစ လမ်းဝပေါ် ရောက်ကာစ ဓမ္မာစရိယ သံဃာများအား ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းကို မရခဲ့ရင် လမ်းပျောက်သွားကြတယ်၊
အဲဒီလို အရည်အချင်း အသင့်အတင့်ရှိလာတဲ့ သာသနာအတွက် လောကအတွက် အသုံးဝင်မယ့် သံဃာတော်များအတွက် တကယ်သင်ကြားပို့ချပေးနိုင်တဲ့…
၁။နိကာယကျောင်းတိုက် သို့မဟုတ် နိကာယစင်တာ “ နိကာယ်ငါးရပ်မှာ သင်ယူလိုတဲ့ နိကာယ်ကို စနစ်တကျသင်ကြားပေးကြရပါမယ်။ အကုန်သင်ယူနိုင်စွမ်းရှိသူကို နိကာယ်အားလုံး ကုန်စင်အောင် သင်ပေးခြင်း၊ စာပေသုံးသပ်ချက်၊ သမိုင်းကြောင်း၊ နိကာယ်ထဲက လူမှုရေး နိုင်ငံရေးစတာတွေကို သင်ကြားပေးရပါမယ်။
၂။ တောင်တန်းသာသနာပြုကျောင်း သို့မဟုတ် သာသနာပြုစင်တာ “ ပြည်ပအတွက် မဟုတ်ဘဲ မြန်မာပြည်တွင်းက အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့ တောင်တန်းတွေ နယ်စပ်တွေမှာ သာသနာပြုနိုင်ဖို့ ၎င်းဒေသရဲ့ ဘာသာစကား ရာသီဥတု ယဉ်ကျေးမှုများကို သင်ကြားပေးခြင်း၊ ၎င်းဒေသမှာလိုအပ်နေတဲ့ ဆေးဝါး ပစ္စည်းများကို သာသနာပြုရာမှာ လူတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့ထောက်ပံ့ကူညီပေးခြင်း၊ သာသနာပြုရဟန်းတစ်ပါးရဲ့ ရှိရမည့်စိတ်ဓာတ်များကို သင်ကြားပေးခြင်း စသည်များ လုပ်ရပါမယ်။
၃။ နိုင်ငံခြား သာသနာပြု သင်တန်းကျောင်း.. ဘာသာစကား သမိုင်း ပထ၀ီ ယဉ်ကျေးမှုများ၊သာသနာပြုအောင်မြင်ဖို့အတွက် Public Relationship လုပ်ရာမှာ ရဲရင့် တည်ကြည်လာအောင် ဟောနည်း ပြောနည်းများ။ သင်ကြားပို့ချပေးရုံ သက်သက်မဟုတ်ဘဲ သွားရောက်ရမည့် နိုင်ငံ၌ နေရာဒေသ ရှာဖွေပေးခြင်းကို ပါ ၎င်းစင်တာက တာဝန်ယူပေးနိုင်ရမည်၊ ထိုသို့ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ထောက်ပံ့သည့် အဖွဲ့အစည်းများဖွဲ့ထားပေးရမည်။
၄။ Dhamma School ကျောင်းများကို မြို့နယ်တိုင်းဖွင့်ပေးနိုင်ရန်..ဆရာဖြစ် သင်တန်းများပို့ချပေးခြင်း၊ ၎င်းတို့ အချင်းချင်း လက်ချင်းယှက် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် Sangha Community တစ်ခု ထူထောင်ခြင်း။
၅။ ယတ်ကော ပတ်ကော မလုပ်တဲ့ သံဃာတွေကို စည်းရုံးပညာပေးခြင်း၊ အလုပ်လုပ်တဲ့သံဃာတွေများလာတဲ့အခါမှာ ဘာမှမလုပ်တဲ့ သံဃာတွေ ဘောင်ကျဉ်းသွားပါမယ်။ ဓမ္မခေါင်းထောင်နိုင်အောင်သာ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်၊ သံဃာများ ဘာတွေ ဘယ်လိုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာထက် အဲဒီလို မလုပ်အောင် အစားထိုးပေးခြင်း ပညာပေးခြင်း။
မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ သံဃာလေးသိန်းကျော်မှာ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအရ သာသနာ့ဘောင်ဝင်ခဲ့ရသူတွေဟာ အများစုပါပဲ.. သာသနာကိုကြည်ညိုလို့ ၀တ်လာသူဆိုတာ လက်ချိုးရေတွက်လို့ ရတဲ့အနေအထားမှာ ရှိပါတယ်၊ ဒါဆိုတော့ သာသနာဘောင် ၀င်ရောက်ရခြင်းရဲ့ နောက်ခံ Background က အရေးမကြီးဘဲ သာသနာထဲကို ရောက်လာပြီးရင် သာသနာ့စိတ်ဓာတ် ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာက ပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်။ သဒ္ဓါ ပညာ ဟန်ချက်ညီညီထားနိုင်တဲ့ သံဃာတော်များ တိုးပွားလာဖို့ ပိုပြီးအဓိက ကျတယ်၊ သံဃာအများစုဟာ ဆင်းရဲတဲ့ ကျေးလက်က မွေးဖွားလာကျတာဖြစ်လို့ ပစ္စည်းလာဘ်လာဘ ကို ပိုမိုခင်တွယ် တတ်ကြတယ်၊ လိုချင်သူကို ပေးကမ်းခြင်းဖြင့် စည်းရုံးနိုင်ပါမယ်၊
သီရိလင်္ကာမှာတော့ သာသနာကို သံဃာတွေက စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာထက် ဒကာ ဒကာမများက ရဟန်း သံဃာတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို အစွမ်းကုန်ဖြည့်စီးပေးခြင်းဖြင့် သာသနာကို တဖက်တလှမ်းက စောင့်ရှောက်ကြတာ အတုယူစရာပါ၊ မဟုတ်တာ လုပ်ချင်တဲ့ သံဃာတွေတောင် မိမိကိုယ် အစွမ်းကုန်စောင့်ရှောက်နေတဲ့ ဒကာ ဒကာမတွေကို ငဲ့ပြီး မကောင်းတဲ့စိတ်ကူးတွေ လွင့်ပြယ်သွားနိုင်ပါတယ်၊
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု မြန်မာ့လူ့ဘောင်မှာတော့ ဒကာ ဒကာမတွေက နာမည်ကြီးသူကိုမှ ရွေးပြီး ကိုးကွယ်တတ်တာလဲ သာသနာအတွက် အားနည်းချက်ပါ၊ သာသနာတော်ထွန်းကားတယ်လို့သာ အော်ဟစ်နေတာ ကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ရပ်က ဘယ်ကိုဦးတည်နေတယ်ဆိုတာလဲ မစဉ်းစားမိတော့ပါဘူး၊ သာသနာစကားဆိုလာတော့ သံဃာတော်များသာမက. ဒကာ ဒကာမများလဲ ပတ်သက်ဆက်နွှယ်မှု ရှိပါတယ်။
ဒီခေါင်းစဉ်အောက်က ဦးဇင်းရဲ့ဆွေးနွေးမှုကတော့… သာသနာ့ဘောင်ကို ဘယ်လို Background နဲ့ ၀င်ဝင် ဘယ်လိုအခြေအနေနဲ့ဝင်ဝင်.. သာသနာဘောင်ရောက်လာသူဟာ
၁။ စာသင် စာချ ပေးတဲ့နေရာကို ရောက်ဖို့
၃။၎င်းဆရာက အဆင့်မြင့်ပညာတွေသင်ပေးတဲ့နေရာကို ပို့ပေးနိုင်ဖို့
၄။စာပေတွေ သင်ကြားရင်း သဒ္ဓါတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့သာ
ကိုဝိမုတ္တိရဲ့ ဒီလိုလေးလုပ်ရင် ကောင်းမလားလို့ဆိုတဲ့ ဆွေးနွေးချက်က ကျယ်ပြန့်လွန်းနေပါတယ်။ စာတမ်းတစ်စောင်လို ပြုစုမှ သေသေချာချာ တင်ပြနိုင်ပါမယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ခေါင်းစဉ်နှစ်ခုအောက်ကနေပဲ ဆွေးနွေးလိုက်တယ်။ ကျန်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကို တစ်ခုစီခွဲပြီး ဆွေးနွေးသင့်တယ်လို့ မြင်တယ်၊ ဆွေးနွေးစရာတွေ များလွန်းလှပါတယ်.. စကားဝိုင်းဖြစ်အောင် ဖန်တီးနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါမယ်၊ အင်း..ကိုဝိမုတ္တိရေ.. ဒီလိုလေးဆိုရင် ကောင်းမယ်ထင်ပါရဲ့…..
Posted by The Bliss Of Emancipation at 10:07 AM